BTS အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးမှာ တက်တူးဘယ်နှစ်ခုစီထိုးထားကြသလဲ? ဘာကြောင့်လဲ
BTS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်အားကောင်းလွန်းတဲ့ ဂီတအနုပညာတွင်သာမက လှပသောအသွင်အပြင်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကြောင့်လည်း လူသိများကြတာဖြစ်ပါတယ်။ BTS လို့ ပြောလိုက်ရင် သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပင်ကိုယ်ဆွဲဆောင်မှုလေးတွေအများအပြားရှိနေတာကို ချက်ချင်းသတိရစေပါတယ်။ ဥပမာ – ညက်ညောပျော့ပျောင်းပြီး အင်မတန်လှပနေတဲ့ dance move တွေ၊ ခေတ်မှီစတိုင်ကျသော ဆံပင်ပုံစံတွေ၊ ချစ်စဖွယ်နှစ်လိုဖွယ်ရာအပြုံးတွေနှင့် သူတို့ရဲ့ killer ဖက်ရှင်တွေ….စသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့ဒီ့အချက်တွေကပဲ သူတို့ကို Bantang Boy လေးတွေဖြစ်စေခဲ့တာပါ။
BTS အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ သိပ်ပြီးပြောလေ့ပြောထမရှိတာက တက်တူးတွေကို စုဆောင်းထားတဲ့အကြောင်းကိုပါ။ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတော့ တက်တူးမထိုးထားကြပါဘူး။ အဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာလည်း တက်တူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်မတူတာတွေရှိပါတယ်။ Army တွေအနေနဲ့ကလည်း အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ မှင်စက်တွေတွေ့တဲ့အခါတိုင်း သူတို့ပါးစပ်ထဲက ရေတွေထွက်ရလောက်အောင်အထိ ခေါင်းခါကြပါတယ်။
သို့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Army အများစုဟာ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျမြင်တတ်လာကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုရီးယားမှာလည်း ဂျပန်နှင့်တရုတ်မှာလို တက်တူးထိုးထားသူတွေကို ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်မယ့်လူတွေလို့ ရှုမြင်နေကြတုန်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အနုပညာဆိုတာထက် ခန္ဓာကိုယ်အသွင်အပြင်ပျက်စီးစေတယ်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကတော့ သမားရိုးကျဘဝထဲကနေ ခွဲထွက်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေလုပ်နေပါပြီ။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့ဟာ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အားကစားခန္ဓာကိုယ်မျိုးလိုချင်တာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ခံစားချက်တွေကို တက်တူးအဖြစ် အသွင်ပြောင်းထားကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်က တက်တူးတွေကိုသာ သင်သိရမယ်ဆိုရင် သင်အံ့ဩမိကောင်း အံ့ဩပါလိမ့်မယ်။
BTS ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ V ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တက်တူးလုံးဝမရှိပါဘူး။ ‘ON’ MV ထဲက တက်တူးအတုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မုန်တိုင်းထန်စေခဲ့ပါသေးတယ်။ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တောမီးလောင်နေသလိုပဲ တော်တော်လေး hit ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ V ဟာ ညာဘက်ပါးပေါ်က ‘ the shadow like me’ ဆိုတဲ့စာသားနှင့် လည်ပင်းမှာလည်း အက်ကွဲလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်လိုမျိုး သွေးကြောဆိုင်ရာ တက်တူးကို ထိုးထားခဲ့တာပါ။
‘အို..V က တက်တူးထိုးထားတာလား?’ ‘OMG- Tae က တက်တူးလေးနဲ့ဆို So hot’ ‘ဒါပေမယ့် ဒါကြီးက သက်သက်ဆေးခြယ်ထားတာမလား? ဒါတွေဟာ Youtube ရဲ့ comment တွေပါ။ V ရဲ့ တက်တူးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်များများက ထင်မြင်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Army တွေကတော့ V ရဲ့ တက်တူးတွေကို အချိန်တော်တော်ကြာ တော်တော်လေးသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ နောက်ထပ်တက်တူးမရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်ကတော့ J – Hope ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတော့ J – Hope ဟာ သူ့ရဲ့ နားတစ်ဖက်တစ်ချက်စီရဲ့ အနောက်ဖက်တွေမှာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ လခြမ်းပုံသဏ္ဍာန်တက်တူးနှင့် လဝန်းပုံတက်တူးကို ခဏတာမှ စမ်းသပ်ထိုးကြည့်ပြီး ၎င်းရုပ်ပုံကို ၎င်းတို့အဖွဲ့ရဲ့ တရားဝင် twitter အကောင့်မှာပဲ တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
Jin နှင့် RM တို့ကတော့ တက်တူးကို နည်းနည်းလေးမှ စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ တက်တူးကို ယာယီခတ္တလည်း မစမ်းသပ်ဖူးသလို ရေရှည်ထာဝရလည်း မထိုးကြပါဘူး။ RM က tattoo sleeve တွေနဲ့သာ ဖိုတိုရှော့ခ်လုပ်ဖူးပြီး Jin ကတော့ သူတို့ရဲ့ လက်ရုံးကြွက်သားတွေနှင့် လက်ဖျံတွေပေါ်မှာ မှင်တွေနဲ့ ဖိုတိုရှော့ခ်လုပ်ဖူးပါတယ်။
Suga အနေနဲ့ကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်နဲ့ တက်တူးဟာ မအက်စပ်ဘူးလို့ တွေးမိတာကြောင့် ဘယ်လိုတက်တူးမှ သူ့ဆီမှာမရှိပါဘူး။ သူငယ်ငယ်က အမှန်တကယ်တက်တူးထိုးချင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အသက် (၂၅) နှစ်လောက်မှာ စိတ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Suga ဟာ Pharell Williams တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ တက်တူးကို ဖျက်ပစ်လိုက်တာကို suga သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း တက်တူးက ဘဝကို နောက်ပြန်ဆွဲစေနိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာကြောင့် တက်တူးတွေကို သူမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာ နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။
‘ကျွန်တော့်ကအနာဂတ်မှာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဗျ၊ ဒါပေမယ့် တက်တူးတွေက အပျက်သဘောဆောင်တယ်လေ၊ ဒါ့ကြောင့်မို့ ကျွန်တော်နောင်တမရချင်ဘူး’ လို့ Suga ကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Suga ဟာ တက်တူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့အတွေးတစ်ခုရှိနေခဲ့တာပါပဲ။ သူက သူ့ရဲ့ ခြေထောက်မှာ ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်တဲ့ တက်တူးအစက်လေးသေးသေးလေးလောက်တော့ ထိုးချင်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ယောက်ယောက်က တကူးတကတက်တူးရှိလားလို့ မေးလာခဲ့ရင်တော့ သူ့ရဲ့ ခြေအိတ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲချွတ်ပြပြီး မနည်းရှာဖွေရမယ့်အနေအထားပါပဲ။ ဒါကတော့ တော်တော်လေးခမ်းနားထည်ဝါပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ဟာသစိတ်ကူးတစ်မျိုးပါပဲ။ Sorry , ထူးဆန်းတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
Jimin ရဲ့ တက်တူး
Jimin မှာတော့ တက်တူးတစ်ခုရှိပုံရပါတယ်။ တက်တူးထိုးတဲ့ကာလ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီးနောက်မှာ သူတို့ရဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ ‘Intro;Never Mind’ ဆိုတဲ့ performance featuring အတွက် ယာယီတက်တူးစထိုးခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ယာယီတက်တူးထိုးတယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က concert တစ်ခုမှာ Jimin ရဲ့ တက်တူးကြောင့် Fan တွေဟာ ပွဲဆူခဲ့ကြပါသေးတယ်။
Jiminကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ တက်တူးခန်းမအတွင်းပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Jimin အနေနဲ့ သူတက်တူးထိုးထားတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမယ့် ငြင်းဆိုထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ ဆိုတော့ နည်းပညာပိုင်းအရ သူတကယ်ပဲ permanent တက်တူးရှိလားဆိုတာ ကျွန်မတို့မသိပါဘူး။
Jungkook ရဲ့ တက်တူး
Jungkook ကတော့ အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာ တက်တူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ တက်တူးအစစ်တွေ၊ တက်တူးအတုတွေရော ဘယ်နှစ်ခုရှိမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ Jungkook ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးတက်တူးကတော့ ” ARMY” တက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတက်တူးမှာ အဓိပ္ပာယ်တွေအမြောက်အများကို မြှပ်နှံထားပါတယ်။ ပထမဆုံးနှင့် အထင်ရှားဆုံးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့ band ရဲ့ သစ္စာတရားတွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတဲ့ fanbase ကို ချီးကျုးဂုဏ်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအယူအဆက သူတို့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးရဲ့ အမည်ကို ဆိုလိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ‘ARMY’ မှာပါတဲ့ ‘ A’ ဆိုတာ အမှန်တကယ်ဇောက်ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ V ကို ဆိုလိုပြီး RM ကတော့ RM ပါပဲ။ Yoongi (Suga) အတွက် ‘ Y’ နှင့် Jin, J-Hope, Jimin တို့အတွက်တော့ ‘J’ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‘J’ ဆိုတာကတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ ‘ ARMY’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးထဲက ‘M’ အပေါ်မှာ ထိုးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Shipper တွေအနေနဲ့တော့ ဒီအချက်ကို အမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
Jungkook ဟာ သူ့ရဲ့ ညာဘက်လက်မောင်းပေါ်မှာ ‘ Rather be dead than cool’ (စာသား အားလုံးမဖြစ်နိုင်)ဆိုတဲ့ တက်တူးတစ်ခု၊ ပုခုံးပေါ်မှာလည်း ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ တက်တူးတစ်ခု၊ အနက်ရောင်အစင်းကြား (၃) ခု၊ tiger lily နှင့် Rock ON အတွက် ‘I Love You’ ဆိုတဲ့ sign Language တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အရိုးစုလက်၊ မျက်လုံးတစ်လုံးနှင့် နောက်ဆုံး တရုတ်ကာရိုက်တာတွေမှာပါဝင်တဲ့ ‘ The most beautigul moment in life’ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြားတက်တူးတွေကတော့ Jungkook ရဲ့ လက်တွေပေါ်မှာ နှလုံးသားတစ်ခု၊ သရဖူတစ်ခု၊ emoji တစ်ခုနှင့် သူ့ရဲ့ လက်မမှာတော့ ”0613” ဆိုတဲ့ နံပါတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ ၎င်းက BTS ပွဲဦးထွက်နေ့ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့တော့ ဆိုကြပါတယ် (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန် ၁၃ရက်) ။ Jungkook မှာ တရားဝင် permanent တက်တူး ၁၂ နှစ်ခုလောက်ရှိပါတယ်။ BTS အဖွဲ့မှာ တရားမဝင်တဲ့ တက်တူးပေါင်း (၁၃) ခုရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Jungkook ဟာ သူ့ရဲ့ Permanent တက်တူးတွေအားလုံးကို အတည်ပြုထားသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုထားဘူးဖြစ်စေ Jungkook ကတော့ သူလုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေဦးမှာပါပဲ။ သူ့အတွက်တော့ အရာအားလုံးက လေမှာပဲရှိနေပြီး ဘယ်အရာကိုမှ အတည်တကျ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်လို့ ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Lee Kwang Soo ကတော့ အရိုးသားဆုံးအဖြေကို ပေးခဲ့တာပါ။ Blackpink အဖွဲ့ဟာ သိပ်မကြာသေးခင်ကာလက Running Man မှာ ဂိမ်းတွေတော်တော်များများကို ပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ တစ်ချို့အမှားအယွင်းလေးတွေကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ တစ်ချို့နေရာမှာ ပွဲဆူနေပါသေးတယ်။ သူတို့ကစားခဲ့တဲ့...
တစ်ခါတရံမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ မော်ဒယ်တွေလို ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံမျိုးတွေ ကြည့်ချင်ကြမှာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အွန်လိုင်းမှာအချိန်ဖြုန်းမိတဲ့ကာလလေးမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာလေးကို မြင်တွေ့ရဖို့ အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်တို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်စည်းပေးဖို့ Rover လာပါပြီ။...
အရည်အချင်းဆိုတာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လာပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကို ရှာတွေ့တဲ့အခါ အမြင့်ဆုံးထိ တတ်လှမ်းပါ။ ကီရာလာမှ ဒီကလေးမလေးဟာ တစ်နာရီအတွင်းမှာ အစားအစာ ၃၃မျိုးကို ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် မှတ်တမ်းတင်ခံရပါတယ်။ ကျွန်မတို့အများစုက အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ လူကြီးတွေ ဖြစ်ကြပြီး ကျွန်မတို့ဟာ ရှင်သန်ဖို့...
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ရုပ်ရှင်ချစ်သူတိုင်းအတွက် အသစ်ထွက်တိုင်း၊ အသစ်ထွက်တိုင်းမှာ ရင်ခုန်မှုရသအစုံကို ပေးစွမ်းနေကျပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်ဖို့ရှိတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားသစ် “No Time To Die” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကလည်း လက်ရှိဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားဖြစ်တဲ့ ဒန်နီယဲယ်ခရိတ်ဂ်ရဲ့ နောက်ဆုံးသောဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ...